नेपाली खानाको सङ्ग्रहालय बनाइँदै « Mero LifeStyle
सेक्सबारे केही रोचक तथ्य !
अपाङ्गता भएका व्यक्ति संक्रमित भएमा के गर्ने ?
नयाँ मन्त्रीहरुलाई कामकाजमा रोक, यी हुन् पदमुक्त भएका २० मन्त्री
लापरवाहीले लिइरहेको छ ज्यान !
थप ४ हजार ९ सय ५४ जना कोरोना संक्रमण मुक्त
जहाँका मन्त्रीलाई रक्सी पिएर बजेट पेश गर्ने छुट छ !
के छ, भर्चुअल कक्षाको विकल्प ?
बालबच्चाहरुलाई तनाव भएको कसरी थाहा पाउने ?
शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ राख्ने योगका प्रकार
नेपाली खानाको सङ्ग्रहालय बनाइँदै
मेरो लाइफस्टाइल	|| 23 April, 2021
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) ले मुलुकका ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशका सबै जातजाति र भाषाभाषीका स्थानीय नेपाली खानाका मौलिक परिकारको अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम प्रतिष्ठानले अघि सारेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेपाली खानाको फुड बैंक वा सङ्ग्रहालय बनाउने सोच बनाएको प्रतिष्ठानले कोदोको खिरसमेत चखाउने छ । निकट भविष्यमै इ–लाइब्रेरी पनि सञ्चालन गर्दैछ । साथै, खाना बनाउने तालिमको व्यावहारिक अभ्यासका क्रममा उत्पादित खानाका परिकार सहुलियत मूल्यमा बेच्ने तयारी गरिरहेको छ ।
हाल प्रतिष्ठानमा करिब एक हजार ६ सय विद्यार्थी शैक्षिक तथा तालिम कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । पोखरामा पर्यटन तालिम केन्द्र, सिन्धुपाल्चोकको बलेफीमा ¥याफ्टिङ स्कूल र नुवाकोटको ककनीमा टुरिजम रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिन प्रतिष्ठानले संसद् र सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेपाली खानाको फुड बैंक वा सङ्ग्रहालय बनाउने सोच बनाएको प्रतिष्ठानले कोदोको खिरसमेत चखाउने छ । साथै, खाना बनाउने तालिमको व्यावहारिक अभ्यासका क्रममा उत्पादित खानाका परिकार सहुलियत मूल्यमा बेच्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सदस्य सुरेन्द्र कार्कीले नेपाल बहुजाति, भाषा र धर्म रहेको विविधतायुक्त देश भएकाले हरेक जातीय आतिथ्य र स्वागत गर्ने परम्परागत संस्कृति र शैलीबारे पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको विचार राख्छन् ।
प्रतिष्ठानले अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीलाई मुलुकभित्र उपलब्ध हुने ‘हाइजेनिक र हेल्दी फुड’ बारेमा पनि शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको सदस्य कार्कीको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठान २०२९ चैत १३ गते स्थापना भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरेको छ । हालसम्म शैक्षिक कार्यक्रमतर्फ दुई हजार तथा विभिन्न समयावधिका तालिममार्फत ५४ हजार जनशक्तिलाई स्वरोजगारमूलक शैक्षिक कार्यक्रम र तालिम प्रदान गरिसकेको छ । यसले झापाको विर्तामोड, महोत्तरीको बर्दिवास र बाँकेको नेपालगञ्जमा शाखा विस्तार गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य मुलुक, बिमस्टेक र चीनका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पढाइ सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छ । रासस
सेक्सको विषयमा व्यक्तिहरूमा धेरैलाई उत्सुकता हुन्छ । केही व्यक्तिहरूले यौनलाई मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिन्छन् भने केहीले बच्चा जन्माउन यौनलाई अत्यन्तै
कोरोनाको दोस्रो लहरमा बालकदेखि वृद्धासम्मलाई संक्रमण फैलिएको छ । यसबाट शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरु पनि कोरोना संक्रकित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरषद्लाई मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार
पाँचथर जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिका घर भई फिदिममा बस्दै आएका ४५ वर्षीय पुरुषले ज्वरो, रुघाखोकीलगायत स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि गत जेठ ३